संविधानमा कुनै विभेद छैन, बुझाइमा गलत हो
० मन्त्रीबाट हटेपछि कता के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले ?
–म त अहिले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छु (भोजपुर–१) जनताको साथ पाएर चुनाव जितियो । एक पटक मन्त्री पनि भइयो । जनतालाई गरेका वाचा कति पूरा गरियो त भनेर हरेक गाउँ घुम्ने मेसोमा छु । जनतासंग साक्षात्कार गरेर उनीहरूका आवश्यकतालाई बुझ्न घरदैलो कार्यक्रममा आएको छु । काठमाडौंमा बसेर संविधान बनाइयो । अब त फेरि यहींका जनताको सेवा गर्नुपर्‍यो नि भनेर आएको हो । फेरि अर्को कुरा के भने जनतालाई संविधान बारे पनि बुझाउनु छ । यो सरकारको नीति नै भएकाले पनि जनतासंग साक्षात्कार गर्न जरुरी छ ।
० जनतासंग गरिएका वाचा के के पूरा गरिएछ त ?
–वास्तविक कुरा जनतालाई भन्दाखेरी त्यो राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जनताले मलाई संविधान बनाउन चुनेकाले महत्वपूर्ण काम संविधान बनाइयो । अब त्यही संविधान कस्तो छ त भनेर बुझाउनु पर्छ । विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनेको छ । यो संविधानको प्रयोग गरेर दलित, जनजातिलगायत सबैले हक अधिकारका कुरा उठाउन पाउँछन् । त्यसकै जानकारी गराउनु पर्छ भनेर नै म जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आएको हु ।
० तर, संसद बैठक नै छोडेर जिल्लातिर लाग्नुभएछ । कोरम नपुगेर हैरान भयो नि यता ?
–म त संसदमा नियमित भइरहने सांसद परें । यसपटक मेरो यो यो काम छ भनेर जानकारी गराएरमात्र जिल्लामा आएको हुँ । यसलाई अन्यथा नलिउँ । ठूलो मिसनमा हिंड्दाखेरी झिनामसिना घटनाहरू हुने गर्छन् । तर आउँदा दिनमा कसरी सुधार गरेर लैजाने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
० अहिलेको प्राथमिकता त भूकम्प पीडित जनतालाई बचाउने हैन र ?
–भूकम्प पीडितका लागि सरकारले काम गर्दैछ । पुन:निर्माण विधेयक पारित भएपछि काम अब द्रुतगतिमा अगाडि बढ्छ ।
० पीडितका नाममा कार्यकर्तालाई फाइदा पुगेको छ पो भनिदैछ नि ?
–त्यसो होइन । दक्षलाई राख्ने हो । प्राधिकरणमा पनि दक्षलाई ल्याइएको छ । अहिले राख्ने क्रममा आफ्ना परे होलान् । तर भोलि उसले गरेको कामको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । पार्टीको कार्यकर्ता रहेछ भनेर भन्नु हुँदैन । कामको मूल्यांकन गरौं न पहिले । अनि गरौंला आलोचना ।
० तपाईं त अहिलेका प्रधानमन्त्रीको नजिकको मान्छे । कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ त सरकारको क्रियाकलापलाई ?
–संविधान बनेपछि त्यसलाई लागु गर्नका लागि ऐन नियम बनाउनु पर्ने थियो । तर, विभिन्न बन्द, हड्ताल गरेर संविधानका बारेमा खोचे थाप्ने प्रवृत्तिले देश, जनता र सरकारलाई धेरै नै कष्ट दिएको छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई काम गर्नमा अवरोध पक्कै भएको छ । तर यसको मतलव यो होइन कि उहाँले कामै गर्न सक्नुभएन । त्यो ढङ्गले व्याख्या नगरियोस् । सरकारलाई काम गर्ने वातावरण पनि त दिनुपर्‍यो नि । मान्छेमा दुईवटा कुराहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । साहै्र सजिलो काम हो अर्काको आलोचना, टिप्पणी गर्न र गाह्रो चाहिं काम आफै गर्न ।
० ए, त्यसो भए जनआन्दोलन दबाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका दुर्जकुमार राईलाई सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख बनाउनु राम्रो भयो ? जसलाई तपाईंहरू आफैले पोष्टर टाँसेर कार्वाही गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ?
–त्यो नौलो कुरा भएन । उहाँ त कार्यदक्षताका आधारमा त्यहाँ पुग्नु भएको हो । हरेक राजनीति र सरकार विधि र पद्धति अनुसार चल्ने हो । विधि र प्रक्रिया ठूलो कुरा हुन्छ ।
० त्यसो भए अख्तियार प्रमुखलाई काम गर्न किन अवरोध गर्न खोज्नुभयो त ?
–मान्छेहरूलाई कहिलेकाहीं अनावश्यक आरोप आउने गर्छ । आरोपकै आधारमा कोहीप्रति गलत दृष्टिकोण बनाउनु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । पछिल्लो समयमा उहाँहरूले सफाइ पाइसकेको अवस्थामा नेपाली नागरिकको हैसियतले त्यो ठाउँमा पुग्नु कुनै अनौठो कुरा होइन ।
० अनि त्यो राजनीतिज्ञले चाहिं जे गरेपनि कुनै कार्वाही भोग्नु नपर्ने ?
–त्यो त चुनावमा तलमाथि भएकै छ नि । त्यही हो जन कार्वाही । त्यही हो, दण्ड र पुरस्कार ।
० अब संविधानकै कुरा गरौं, तपाईहरूले जारी गरेको संविधान विभेदका नाममा जलाइएको छ । कसरी विभेद भएछ ?
–संविधानमा कुनै विभेद छैन । बुझाइमा गलत हो । हाम्रो आपसी समस्या दुई जना बसेपछि समाधान भइहाल्छ । अन्त कतैबाट परिचालित हुने हो भने त्यो जहाँ गए पनि समाधान हँुदैन । संविधानमा कुनै खोट छैन । अहिलेको संविधान संसारकै उत्कृष्ट हो भन्ने दावी पनि गर्छु । तर, यसलाई सबै खालका जातीय अतिवादीले स्वीकार्दैनन् । सबै खालका धर्मले स्वीकार्दैनन् । सबै खालका क्षेत्रीय अतिवादीले स्वीकार्दैनन् । सबै खालका राजनीतिक अतिधर्मीले पनि यसलाई स्वीकार्दैन । समग्रमा नेपाल र नेपालीको हितको पक्षमा संविधान आएको छ । त्यसो हुनाले कोही कसैले कराउँछ भने त्यो बहानाबाजीमात्र हो । संविधानको विारेध जुन भइरहेछ, यो अन्तै कतैबाट परिचालित छ भन्ने स्पष्ट छ । यसलाई चिर्न म आम, समग्र नेपालीलाई आग्रह गर्दछु ।
० कहिले कसरी चिरिन्छ ? संघर्षका नाममा मान्छे त धेरै मारिए त ?
–समय लाग्छ । द्वन्द्वमा, आन्दोलनमा दुई चार जना मान्छे मर्छन् । यो यस्तै घटना हो । संविधानमा रहेको भ्रम अवश्य यो चिरिन्छ । कथाले नमाग्दा नमाग्दै, सबैका हक अधिकार सुनिश्चित गर्दागर्दै तराई आन्दोलनले निम्त्याएको द्वन्द्व घुस्रिएर आएको हो । अब राज्यले सुशासन चलाउन न त सामान्य बल प्रयोग गर्छ । बल प्रयोग गर्दा कहीं अप्रिय घटना हुन गए होलान् । यस्ता छिटपुट घटना त मै हुँ भन्ने प्रजातान्त्रिक देशमा पनि हुन्छन्, भएका छन् । वास्तवमा एउटा सचेत नागरिकले संविधानका सम्पूर्ण धारा र उपधाराहरू अध्ययन गरेर संविधानले मलाई के दियो त भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
० संविधानको धज्जी पनि उडाएजस्तो भयो नि । त्यही संविधानमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले सपथ खाने अनि संविधानकै धज्जी उडाएर २५ बढी मन्त्री बनाउने । आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री बनाउने हो त ?
–६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउन नहुने भनेर कहाँ लेखेको छ र ? मन्त्री, सहायक मन्त्री र राज्यमन्त्री राख्ने व्यवस्था पनि छ । धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक दल र पार्टीहरू सम्मिलित संयुक्त सरकार हो यो । त्यो अनुसार आवश्यकता हेरी राखियो होला । यो संविधानमा उल्लेख भएको मन्त्रिपरिषद्को सीमा, संख्या त नयाँ निर्वाचन भएपछि लागु हुने कुरा हो । अहिले नै लागु हुने भन्ने होइन ।
० अनि यो संविधानमा कार्यान्वयन भएर निर्वाचन हुने आउला त त्यो दिन ?
–नेपालमा उत्कृष्ट संविधान जारी हुँदा नहुँदै मुलुकको तराई क्षेत्रमा द्वन्द्व, हड्ताल, नाकाबन्दी, अभाव सिर्जना गरेपछि गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वन गर्न ऐन कानून नै बन्न पाएका छैनन् । कानूनहरू निर्माण भएपछि त ती सबै व्यवस्थित भएर गइहाल्छन् नि ।
० अनि सरकारले बन्द हड्ताललाई बन्द गराउन किन नसकेको त ?
–सक्छ । तर आम जनता सामु त्यत्रो प्रतिवद्धता जनाएर बन्द हड्ताल नगर्ने भन्ने । अनि अहिले जबर्जस्ती बन्द हड्ताल र नाकाबन्दी गर्ने प्रवृत्तिले सरकार हैरान छ । सरकार धेरै समय मूकदर्शक बनेर बस्न सक्दैन । एम्बुलेन्स नै तोडफोड गर्ने अनि विरामीलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर मार्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले छाड्दैन नि । लोकतन्त्रमा आफ्ना विचार राख्न पाइन्छ संयमपूर्वक । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो । तर यसरी अति त गर्न चाहिं लोकतन्त्रमा पनि छुट हुँदैन । यहाँ त मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने अनि सम्पूर्ण नेपाललाई ठप्प पार्ने काम भएको छ । यो त अपराधिक प्रथा भयो भन्छु म त ।
० नेताहरूले जे गरे पनि त्यो चाहिं कानूनको उपहास नहुने राम्रो हुने, किन ?
–हरेक कुरालाई सकारात्मक सोचका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिलेको संविधानले आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम र मधेसीका साथै पिछडिएको वर्गलाई संवोधन गर्न धारा १६ देखि ४६/४७ सम्म सम्बोधन गरेको छ । समावेशी समानुपातिक हक समेटेर मौलिक हकमा राखेको छ । त्यसैले अहिलेसम्म यस्तो ब्यवस्था कहींकतै नभएकाले उत्कृष्ट संविधान भनिएको हो । टिकाटिप्पणी पनि धरातलीय आधारमा गर्नुपर्‍यो । वास्तविकतालाई हेरेर गर्नुपर्‍यो । राष्ट्र र राष्ट्रियताको ख्याल गर्नुपर्‍यो । नाकाबन्दी र बन्द गरेर समाधान निस्कने होइन । हामी विधि र पद्धतिभित्रै छौं । कहींकतै गल्ती भए सच्याउनुपर्छ । त्यसका लागि तयार छौं । सचेत नागरिकको पनि हात हुन्छ ।
० मान्छेको व्यवहार नै परिचय हो भनिन्छ । जनताले कहिलेसम्म धैर्य गर्ने नेताहरूको व्यवहार परिवर्तनका लागि ?
–जनताले अहिले जसरी धैर्य गरेर बसेका छन् त्यसलाई सम्मान गर्नैपर्छ । नेपाली जनताको हित विपरीत भएका गतिविधिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने भन्ने मेरो मान्यता हो । कहींकतैबाट यस्तो भएको छ भने सदनमा कुरा उठाउने छु । सरकार जिम्मेवार भएर जानुपर्छ । जनताका मागको संवोधन हुन्छ । देश सबैले बुझेकै छन् । सरकार पनि लागेको नि त छ उत्पन्न समस्याहरू छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न ।
सहमति हुन्छ भनिएको त चार महिना भइसक्यो नि कहिले होला र खै ?
– अब धैर्य गर्नुस् छिट्टै समस्याको समाधान हुन्छ । सरकार पनि गम्भीर बनेर लागेको छ । सबै विषयमा सहमति हुनेछ र देश र नेपाली जनताको हितमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नु आन्दोलनरत पक्षको पनि जिम्मेवारी हो, जिम्मेवार हुनेछन् । त्यही आशा गरौं । यसैमा अखण्ड नेपालको भलो हुनेछ ।